dr.fone: Ungazidlulisa kanjani izingxoxo ze-WhatsApp phakathi kwe-iOS ne-Android | Izindaba zamagajethi
dr.fone: Ithuluzi ukudlulisa nokubuyisela WhatsApp ku-iOS naku-Android
Kungenzeka ukuthi ngesikhathi esithile shintshela kwenye i-smartphone ye-Android uye kwenye nge-iOS noma okuphambene nalokho. Inqubo yokudlulisa idatha ayihlali iqondile ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, kunesici esikhathaza abasebenzisi abaningi, okuyizingxoxo zabo kuWhatsApp. Njengoba ungafuna ukudlulisa yonke imininingwane kuhlelo lokusebenza isuke kolunye ucingo iye kolunye. Kepha asazi ntofontofo. Kulokhu, dr.fone iwusizo omuhle.
Ngenxa yaleli thuluzi, sizoba nethuba lokuthi dlulisa i-WhatsApp kusuka kwi-smartphone ye-Android iye ku-iOS eyodwa noma okuphambene nalokho. Ukuze sibe nayo yonke idatha esiyisebenzisa kuhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngaso sonke isikhathi. Ingenye yezici eziningi esinazo ezitholakala ku-dr.fone. Kungenzeka ukuthi ithakazelisa kakhulu kwabaningi.
1 Kuyini dr.fone?
2 Indlela lesi sici usebenza dr.fone
3 Yenza isipele futhi ubuyisele izingxoxo ze-WhatsApp
4 Indlela ukulanda dr.fone
Wondershare - dr.fone Kuyindlela ye- ithuluzi elisinika uchungechunge lwemisebenzi ye-smartphone yethu, zombili i-iOS ne-Android. Siyabonga ngakho, sinethuba lokwenza izenzo ezithile ocingweni. Kukhona ithuba lokulungisa izinkinga zefoni, ukubuyisa idatha kuzo, ukusula idatha yedivayisi ukuvikela ubumfihlo noma ukutakula idatha. Yize inkanyezi isebenza ku-dr.fone ukubuyisela uhlelo lokusebenza lomphakathi.
Kungenxa yalo msebenzi esikhuluma ngawo kuleli cala. Ngenxa yalo sinethuba lokuthi thekelisa noma udlulise lezi zingxoxo ku-WhatsApp kusuka ku-smartphone eyodwa kuya kwenye ngendlela elula kubasebenzisi. Ngakho-ke inqubo iphephile, ilula futhi ishesha kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kokungabaza, ithuluzi abaningi ababelilindile futhi kungenzeka nge-dr.
Indlela lesi sici usebenza dr.fone
Ngenxa yalesi sici, kuzokwenzeka ukudlulisa lezi zingxoxo phakathi kwe-Android ne-iOS smartphone, nhlangothi zombili. Inqubo yokusebenzisa ayinazo izinkinga eziningi kakhulu, ngoba sizokwazi ukukwenza ngqo. Kumele nje silande i-dr.fone kudivayisi, kulokhu kukhompyutha, bese uyethula. Lapho siyivula, sinomsebenzi otholakalayo okuyi-Restore Social Apps.
Ngenxa yalo msebenzi kunjalo kungenzeka dlulisa i-WhatsApp phakathi kwe-Android ne-iPhone noma kusuka ku-smartphone eyodwa kuya kwenye ngendlela elula. Ngakho-ke, lapho dr.fone isebenza, lena umsebenzi ukukhetha kuqala. Ngemuva kwalokho, uhlelo luzocela umsebenzisi ukuthi akhethe uhlelo lapho afuna ukudlulisa khona lezi zingxoxo, kulokhu okuyi-WhatsApp. Ngakho-ke, kufanele uchofoze ku-WhatsApp kuleli cala elithile.
Okulandelayo, chofoza inketho yokudlulisa imiyalezo ye-WhatsApp. Ngemuva kwalokho, ama-smartphones amabili okukhulunywa ngawo kufanele axhunywe kukhompyutha. Kungaba ama-smartphones amabili we-Android, ama-iPhones amabili noma imodeli eyodwa ngayinye. Lapho sebevele baxhumekile kukhompyutha, kufanele ucindezele inkinobho yokudlulisa, ukuze inqubo iqale. Okulandelayo, dr.fone ngokuvamile ubonisa ezimbalwa imiyalezo eziyisixwayiso, okuyinto kufanele ukwamukela noma kunjalo. Ngemuva kwalokho, inqubo yokudlulisa lezi zingxoxo ze-WhatsApp izoqala kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwenye.
Lapho isiqedile, kufanele uvule i-WhatsApp kwi-smartphone entsha, lapho kuthiwe idatha idluliselwe khona. Ngakho-ke, ngaphakathi kohlelo lokusebenza kufanele ubuyise lezi zingxoxo. Ngakho-ke sizoba nazo zonke izingxoxo ebezinazo kuhlelo lokusebenza ezitholakalayo futhi ngenxa yedrone. Le nqubo ayisiyona inkimbinkimbi futhi iphothulwa ngokusemthethweni ngendaba yemizuzu.
Yenza isipele futhi ubuyisele izingxoxo ze-WhatsApp
Yize ukudlulisa akuyona into kuphela i-dr.fone ekuvumela ukuthi uyenze. Njengoba futhi inika abasebenzisi ikhono loku ryenza isipele noma ubuyisele izingxoxo ze-WhatsApp Ngendlela elula. Okungangabazeki okwenza kube inketho ephelele kakhulu. Konke lokhu kungenzeka ngaphakathi komsebenzi ofanayo esiwusebenzise esigabeni esedlule.
Ivumela abasebenzisi ukuthi balondoloze izingxoxo zabo ukuze kungabikho idatha elahlekile nganoma yisiphi isikhathi. Lokhu kuyinto elula ukuyenza. Ngaphakathi kwale nketho yokubuyisela uhlelo lokusebenza lomphakathi esilufakile ngaphambili, sinenketho yokwenza isipele, ngakho-ke esivumela ukuthi senze isipele leso ezingxoxweni zohlelo lokusebenza. Kuyinto okumele siyenze ngenkathi ifoni okukhulunywa ngayo ixhunywe kwikhompyutha, ukuze siyisebenzise.
Ngakolunye uhlangothi, sinethuba lokubuyisela izingxoxo usebenzisa i-dr.fone. Lapho nje kwenziwa isipele sazo, lapho uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo luvulwa ocingweni, usuvele unenketho yokubuyisela imiyalezo ye-WhatsApp kudivayisi. Ngemuva kwalokho kufanele ukhethe ifayela ofuna ukulibuyisa, uma kwenzeka kukhona amakhophi wokusekelayo amaningana enziwe. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi banikezwa ithuba lokukhetha ukuthi yiziphi izingxoxo kuhlelo lokusebenza abafuna ukuzibuyisela. Ngakho-ke umsebenzisi unegama lokugcina ngalo mqondo ngaphandle kwenkinga.
Indlela ukulanda dr.fone
Njengoba ubona, dr.fone iyithuluzi eliwusizo kakhulu izigidi zabasebenzisi emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, uma usuzosuka ku-Android uye ku-iOS noma okuphambene nalokho, uhlelo lokusebenza olungenza le nqubo ibe lula kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, kusinikeza imisebenzi eminingi, ngaphandle kwalona esiwubalulile. Kuluhlelo okufanele silulandele kwikhompyutha, iyahambisana neWindows ne-Mac.
Uma sifuna ukusebenzisa i-dr.fone, singalanda uhlelo lokusebenza mahhala kukhompyutha, kusuka kulesi sixhumanisi. Yize lo msebenzi wokubuyisa umphakathi esikhuluma ngawo, uhlelo lokusebenza olukhokhelwayo. Sinezinhlelo eziningi zokukhokha ezitholakalayo, ukuze ukwazi ukukhetha eyodwa enentshisekelo enkulu, kuya ngokusetshenziswa ofuna ukukwenza. Ungabona kuwebhu zonke izinhlelo ezitholakalayo.
Kunoma ikuphi, kuhle ukucabangela ukusetshenziswa okufanele kwenziwe, ngaphambi kokulanda lolu hlelo lokusebenza. Ukuze ukwazi ukubona ukuthi ingabe ilusizo ngempela kumsebenzisi. Ngakho-ke, kuzoba lula ukukhetha uhlelo olulungela kahle lokho okufunayo. Yize unekhono lokwenza isivivinyo samahhala, ngokuqinisekile kuzoba usizo olukhulu kulokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » dr.fone: Ithuluzi ukudlulisa nokubuyisela WhatsApp ku-iOS naku-Android
I-Amazon Kindle enokukhanya okuhlanganisiwe, kubonakala kungenakwenzeka ukuthuthukisa i-Kindle [UKUHLAZIYA]
Sivivinye i-Xiaomi Mi LED Smart Bulb, enye yama-smart bulb ashibhile emakethe